Slovakia si ay ugu biirto Eurail Global Pass sanadka 2012
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Slovakia si ay ugu biirto Eurail Global Pass sanadka 2012
UTRECHT, Netherlands - Kooxda Eurail GIE ayaa ku dhawaaqday in Slovakia ay ku biiri doonto Eurail Global Pass 1da Janaayo, 2012.
Jidka tareenada qaranka ee Slovakia waxa lagu dari doonaa dalabka Eurail Global Pass ee caadiga ah, kaas oo u ogolaanaya safarka tareenada aan xadidnayn ilaa wakhtiyo kala duwan oo ansax ah oo ah wakhtiyo socdaal oo joogto ah ama maalmo safar dabacsan oo 23 wadan ah. Qiimo dhimis ayaa la siiyaa kooxaha laba ama ka badan iyo dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 26. Qiimuhu wuxuu ka bilaabmaa kaliya 30 euro maalintii shan iyo toban maalmood Global Saver Pass.
"Waan ku faraxsanahay ZSSK (wadada tareenka Slovakia) waxay siin doontaa dadka haysta Eurail Global Pass marinkooda tareenada, iyada oo kordhinaysa kaarka ilaa 23 waddan oo Yurub ah," ayuu yiri Agaasimaha Suuqgeynta, Ana Dias e Seixas.
Slovakia waxay u xuubsiibatay meel loo dalxiis tago Yurub oo caan ah waxayna gashay kaalinta labaad ee meelaha ugu xamaasada badan aduunka ee Ururka Ganacsiga Safarka Adventure (ATTA); qaybta Horumarinta Goobaha Dalxiiska, 2010*.
Jidka tareenka ee Slovakia wuxuu daboolayaa 3616 kiiloomitir (2247 mayl) wuxuuna ku xidhan yahay shabakadda tareenada Yurub oo dhan ee dalalka ku hareeraysan ee Hungary, Austria iyo Czech Republic. Ku safrida Eurail Global Pass waxay ka dhigtaa safar tareen oo dhex mara qaar ka mid ah qaaradaha Yurub ee aan la ogaanin xaqiiqo la taaban karo. Safarka tareenka waxa uu bixiyaa hab nasasho leh, raaxa leh oo ku haboon oo lagu raaxaysto muuqaalada kala duwan, dhaqamada iyo indhaha Yurub.
Bratislava waxaa inta badan loo yaqaan 'Beauty of the Danube' iyo Slovakia waxay leedahay wax badan oo ay bixiso oo u dhexeeya qalcado qurux badan, aragtiyaha kala duwan ee buuraha Tatras, beero canab ah, iyo xarumaha isboortiga iyo fayoqabka ee caanka ah. Nidaamka tareenada Yurub waa mid casri ah oo la isku halayn karo, isku xirka tareenada xudduudaha isaga gudba ayaa ka dhigaya isu socodka qaaradda mid la heli karo. Eurail Global Pass wuxuu u taagan yahay 42% iibka Eurail Pass guud ahaan (in ka badan 70,000 oo safar ah ayaa isticmaalay kaarkan 2010) waxayna sii ahaanaysaa kaarka tareenka caanka ah ee siinaya socotada fursado aan dhamaad lahayn oo ay Yurub ku sahamiyaan tareen.
"Marka lagu daro Slovakia ee badeecadaheena, waxaan rajeyneynaa in Eurail Passes uu sii wado racfaanka macaamiisha mustaqbalka fog. Waa muhiim in gaadiidka tareenku uu waarayo mustaqbalka fog, "ayay tiri Agaasimaha Suuqgeynta, Ana Dias e Seixas.
Magaalooyinka Yurub ayaa ku soo waramaya in qiimaha huteelada oo laba-god ah uu kor u kacay
Huteelada inay la kulmaan koritaan dhexdhexaad ah sanadka 2012